3 Walxood Oo Kaaga Baahan In Aad Maanta Ogaato | Xaqiiqonews
3 Walxood Oo Kaaga Baahan In Aad Maanta Ogaato
Yaa daran “Wixii kugu dhacay mise Sidii aad u falcelisay?
1-Ma jiraan Wax Waligood Raagaya
Waxaa jiri kara maalmo wax walbo oo kugu hareereysan uu kula noqonaayo “mugdi”,rajo xumo ayaana albaabka ku soo garaaceysa, maalmahaasi oo kale waxaa muhiim ah in aad xasuusnaato kalmaddan “ma jiro wax waligood raagaya”.
Fikir, waxaadna ogaataa in habeenkii uu isku badalo maalin, daruurta mugidiga ahna ay isku badasho roob, wax waliba oo aad maanlinkaa dareemeyso waa tagi doonaa.
2-Waad Awoodaa waana Dhihi Kartaa MAYA
Marka shaqo badan ay ku sugeyso, marka dad badan ay ku sugayaan in aad farxad geliso, waa marka aad u baahantahay in aad bilowda isticmaalka “maya”.
In aad dhahdo maya kuma noqoneysid daneysta, laakin waxa aad u baahantahay in aad noqoto xor,aadna erayga maya u isticmaali kartid xaaskaada, qaraabada, dadka aad isla shaqeysaan, saaxibadaad iyo xitaa booskaada.
3-Jooji Falcelinta..Baro Sida Loo Jawaabo
Waligaa ma sameysay falcelin xanaaq ku dhisan, macnaha qof ma ku tiri oraah aad dib uga qowmameysa(shalaaysay)?
Marka aan ranbo in aan ka falcelino waxyaabaha na quseeya, waxaa u baahanahay in aan qaadano waqti nagu fulin oo aan ku dooran karno jawaabta saxda ah.
Sidoo Kale Aqri..3 Khuraafaad Oo Wili Aad Aaminsantahay!
Aan dhahno waxaad fadhisay maqaayad shaah laga cabo, qof ayaa shaah kugu daadiyey waa maxay jawaabta ugu fiican?
In aad xanaaqdo oo adna aad shaah ku daadiso, ama aad aflgaadeyso, si uu isna isku difaaco, mise in aad is dajiso oo aad niyadaada ku noqoto, kana fikirto qaabkii aad jeclaan laheyd in lagula dhaqmo hadii aad adiga ahaan laheyd qofa shaah ku daadiyey.
Nolasha ku dhisan jawaabaha dagan,waa hub aad u isticmaali karta in aad ka xakmeyso caqabadaha kula soo gudnoonaado.
Halkani Riix Si Aad u Heshi Wararka Muhiimk ah ee Bogga hore